Kansarka / kaankarada mindhicirka: Layligani wuxuu kaa caawin karaa la-dagaallanka cudurka wuxuu leeyahay - miyaad sidan sameysaa? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Kansarka mindhicirka: Layligani wuxuu ku caawin karaa inuu la dagaallamo cudurka - ma tani ma samaynaysaa?
Bowel kansarka wuxuu bilaabmaa mindhicirka weyn (mindhicirka) iyo marinka danbe (malawadka). Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa kansarka mindhicirka. Daaweyntu waxay kuxirantahay halka uu kansarku ku bilaabmayo caloosha qofka iyo inta uu le'eg yahay kansarku. Qaliinka badanaa waa daaweynta ugu muhiimsan ee kansarka mindhicirka, laakiin daraasad dhowaan ayaa muujinaysa nooc jimicsi ah si loo yareeyo kororka unugyada kansarka.
Daraasadda, oo lagu daabacay Wargeyska JidhkaHIIT, kobaca unugyada kansarka mindhicirka ayaa la yareeyey, tani waxay sidoo kale muujinaysaa tilmaamaya caabuq.
Wakhti dheer, diiradda saarista jimicsiga ayaa lagu xisaabtamay jirka dhexdiisa.
Si kastaba ha noqotee, natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in saameynta ka dambeysa hal xisbi ee HIIT, nidaam jimicsi oo ku lug leh gaaban oo aad u sarreeya tamarta.
Isbeddelada soo socda ee HIIT waxay soo jeedinayaan in soo noqnoqodka soo noqnoqda ee saameynta jimicsiga ay ka qayb qaadan karto dagaalka ka dhanka ah kansarka.
Natiijooyinkaasi waxay xoojinayaan muhiimadda ay leedahay jimicsiga joogtada ah iyo ilaalinta qaab nololeed firfircoon oo firfircoon.
Daraasaddu waxay sameeyeen By The University of Queensland lala Jaamacadda Waterloo, Ontario, ka badbaaday kansarka mindhicirka Lug Buuxinta Ama fadhiga hal HIIT toddobaad 12 dahab ka badan afar fadhiyo. -baarka dhiigga waxay ahaayeen waqti isla markiiba soo gudbin lamaanahaaga Maamulida ka dib markii fadhiga hal jimicsi ama nasasho toddobaad ah tababar-foornada ka dib, oo la falanqeeyay Markaas inaad wax ka barato koritaanka unugyada kansarka mindhicirka Ama.
Waxaa muhim ah habka loo isticmaalo qaabeynta unugyada kansarka mindhicirka ee shaybaarku u korayo jidhka bini'aadamka, oo u baahan baaritaan mustaqbalka ah si loogu turjumo natiijooyinka burooyinka insaanka.
Ka faaloodka natiijooyinka, James Devin, oo ah qoraaga hogaamiya cilmi baarista ayaa yiri:
"Waxaan soo bandhignay in jimicsigu uu door ka ciyaari karo ka hortagga koritaanka unugyada kansarka xiidmaha. Ka dib markii uu ku dhaco xaalad degdeg ah oo HIIT ah waxaa jira koror gaar ah oo ka yimaada bararka isla markiiba ka dib jimicsi, kuwaas oo lagu qiimeeyo in ay ku lug leeyihiin yaraynta tirada unugyada kansarka.
"Tani waxay soo jeedineysaa in qaab nololeedka firfircoon ee firfircoon uu muhiim u yahay ka hortagga burooyinka mindhicirka ee dadka. Waxaan jeclaan lahayn in aan eegno sida isbadaladaas koritaanka u dhacaan oo ay fahmaan qaababka ay saameyn karaan kobaca. "
Inkasta oo aysan si cad u cadeeyn waxa keena kansarka mindhicirka, waxyaabaha qaarkood ayaa kordhin kara halista cudurka.
Sida laga soo xigtay Bowel Cancer UK, kuwaan waxaa ka mid ah:
Taariikh qoys oo xoog leh ee kansarka mindhicirka
Taariikhda ah kansarka aan kansarka lahayn (polyps) ee calooshaada
Cudurka bararka kelyaha oo sii dheer sida cudurka Crohn ama colitis sambabada
Nolol caafimaad aan caafimaad lahayn
Aalkoladu waa hab nololeed oo kordhin kara khatarta, ayaa lagu yiri NHS-ta: "Cabbitaanka khamriga ayaa loo muujiyay inay la xiriirto khatarta sii kordhaysa ee kansarka mindhicirka, gaar ahaan haddii aad cabto cabitaan fara badan."
Cayilka lala est aussi sano Khatar ka soo korodha kansarka mindhicirka ragga gaar ahaan, ku daray jidhka caafimaadka, waxbarashada sii Top adkeeyo Waxyaabihii iyo samaynta kiiska ee sannadka soo Joogtaynta hab nololeed firfircoon.
Qaar ka mid ah cudurada dheefshiidka aussi laga yaabaa in ay kordhiyaan halista, Siciid NHS ". Tusaale ahaan, kansarka mindhicirka waa ku sii badan dadka-leeyihiin ballaaran oo lahaa cudurka Crohn ama ulcerös kolit in ka badan 10 sano"
Haddii aad leedahay mid ka mid ah shuruudahaan, caadi ahaan baaritaan joogto ah ayaa lagaa rabaa inaad raadiso calaamadaha kansarka mindhicirka.
"Baaritaannada ku lug leh saxarada calooshaada leh colonoscope - tuubo dheer oo ciriiri leh oo ku jira kamar yar. Tani waxay ku xiran tahay hoostaada. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.express.co.uk/life-style/health/1154355/bowel-cancer-symptoms-screening-signs-test-treatment-exercise
Bandhiga la qaadan karo wuxuu saadaalinayaa waxqabadka chemo ee bukaanka kansarka ah